Madaxweyne Xasan: USA ayaa suuragelisay soo nooleynta milateriga Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tababar xerada Jazeera ugu soo xiray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan milateriga Soomaaliya ayaa amaanay Mareykanka iyo Uganda.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dowladda Mareykanku suurtagelisay in dib loo aasaaso ciidamada milateriga Soomaaliya.
“Waxaan u mahad celineynaa dowladda Mareykanka oo suuragelisay in dib loo aasaaso milateriga Soomaaliya oo aan jirin, dedaal badanna ku bixisay ciidamada” ayuu yiri madaxweyne Xasan oo sidoo kale u mahad celiyey dowladda Uganda.
Madaxweyne Xasan oo la hadlay ciidamada la tababaray iyo saraakiisha milateruga ayaa u sheegay hogaanka ciidamada inaan saraakiisha lagu darin dad aan u qalmin.
Ciidamada maanta tababarka loogu xiray xerada Jazeerada ee Muqdisho ayaa ka koobnaa in ka badan konton sarkaal iyo boqolaal ka tirsan ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya.
France: Nin ku qeylinaya “Allahu Akbar” oo 11 ku dhaawacay weerar gaari